राजदूत खाली भएका देशमा राजदूत नियुक्त गर्ने तयारीमा सरकार
प्रकाशित मिति : ६ जेष्ठ २०७५, आईतवार ०५:५४
मलेसियाको राजदूतमा बौद्धिक व्यक्तित्व प्राडा संग्रौलाको सम्भावना
काठमाडौं, ५ जेठ । सरकारले हाल राजदूत खाली रहेका भारत, मलेसिया, युएईलगायत राष्ट्रमा तुरुन्तै राजदूत नियुक्तिको तयारी थालेको छ । मलेसियाका लागि रिक्त रहेको नेपाली राजदूतका लागि प्राध्यापक डा. नारायणप्रसाद संग्रौलाको सम्भावन थप बढेको छ । बौद्धिक राजनीतिक व्यक्तित्वका रुपमा रहेका प्राडा. संग्रौला सरकारले केही दिनमै नियुक्तिको तयारी गरिरहेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत पदका लागि संग्रौला उपयुक्त भएको निष्कर्षसँगै संग्रौलाको सम्भावना बढेको हो । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गरेका संग्रौला यो क्षेत्रमा ज्ञान भएको र कुटनीतिक मर्यादा निर्वाह गर्न सक्ने व्यक्तित्व पनि हुन् । बाम राजनितीमा आफ्नो जीवनलाई समर्पित संग्रौला प्राध्यापनसँगै बौद्धिक राजनीतिमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहँदैं आएका छन् ।
अध्ययन र लेखनमा गहिरो रुचि भएका प्राडा संग्रौला अहिले अवकाशसँगै आफ्नो दैनिकी पुस्तक लेखनमा विताइरहेका छन् । उनी सबै जातजातीको चिनारी भएको एउटा पुस्तक प्रकाशनको तयारीमा जुटेका छन् । त्यसो त उनका आधुनिक नेपालको इतिहास (२०५४), प्राचीन तथा मध्यकालीन नेपाल, सांस्कृतिक पर्यटन र विकास, नेपाल परिचय र पल्लो किराँतको किपड व्यवस्थाजस्ता पुस्तकहरु प्रकाशित भइसकेका छन् । उनका राजनीति सम्बन्धित पुस्कहरुसमेत प्रकाशन भएका छन् । अहिले अध्यापनसँगै कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिय रहेका डा संग्रौला पछिल्लो समय नेपालको संस्कृति, पर्यटनलगायतको अध्ययनमा व्यस्त छन् । जसको मूल उद्देश्य उनी हामी नेपाली हौँ भन्ने भावलाई सधै जोगाईराख्नका लागि सम्बन्धित विषयमा अध्ययन, पुस्तक लेखन र त्यसको ज्ञान नयाँ पुस्ताहरुलाई बाँडनु रहेको डा संग्रौला बताउँछन् । विक्रम सम्वत् विस २०३६ सालको शिक्षक आन्दोलनमा २४ घण्टे अनशन बसेका उनी सोही साल २०३६ पछि अध्यापनसँगै राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए ।
देशमा २०४६ को आन्दोलनमा पनि प्राध्यापक संघमा रहेर आन्दोलनमा सहभागी भए । उनले २०४५ सालदेखि महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापक पेशा शुरु गरे । यसैगरी उनी विस २०५२ देखि २०५६ सम्म सोही क्याम्पसमा सहायक क्यापस प्रमुख भए भने २०५६ देखि २०७२ भदौसम्म पदमकन्या क्याम्पसमा प्राध्यापकको रुपमा जिम्मेवारी वहन गर्दै अवकाश लिए । यसपछि उनले २०७२ सालमा शहिद रामनाथ बहुमुखी क्याम्पसको क्याम्पस प्रमुखको जिम्मेवारी लिए ।
डा संग्रौला तेह्रथुम जिल्लाको आठराईमा जन्मेका हुन् । झापा सरेपछि उनले २०३० सालमा एसएलसी त्यहींबाट दिए । विद्यालय जीवनकालमा नै राजनीतिमा होमिएका प्राडा संग्रौलाले विस २०२६ सालमा नै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता लिएका थिए । सो समयमा उनले अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र रामनाथ दाहालसँग एउटै कमिटीमा बसेर काम गरे । राजनीति गरे पनि उनले कहिलै पढाईलाई भने विश्राम दिएनन् । राजनीति गर्दाको समयमा उनले भमिगत जीवनसमेत विताए ।
डा संग्रौला अहिले नेपालको राजनीति प्रति चिन्तित छन् । उनी भन्छन– ‘ज्यानको बाजी राखेर हिजोको दिनमा देश र नेपाली जनतालाई केही हुन्छ भनेर लडियो, तर प्रजातन्त्र आएको यत्तिका वर्षसम्म पनि सोचे अनुसारको परिवर्तनको अनुभुति भएन । उनले अहिले कम्युनिष्टको बहुमतको सरकार आएकाले धेरै आशा जागेकोसमेत बताए । संग्रौलाले देश रहे र विकाश भए हामी रहने र हाम्रो विकाश हुने भएकाले देश बनाउन सबैले उत्तिकै पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन । विस २०४६ साल अघि र पछिको राजनीतिमा आकाश–पाताल को फरक आएको बताउने डा संग्रौलालाई अहिलको राजनीति राजनीति जस्तो नै लाग्दैन ।
‘अहिले राजनीतिमा केही डर, क्रास वा पक्राउ पर्ने अवस्था छैन । अहिले कसैले समाउला, मार्ला, पक्रेला भन्ने छैन् । अहिले त जो पनि लाग्छ नि राजनीतिमा । पहिलाको राजनीति सम्झिदा सपना जस्तो लाग्छ’, डा संग्रौला भन्छन । देशको वर्तमान अवस्थाप्रति चिन्तित डा संग्रौला युवाहरु विदेशमा पलायन भएकोमा निकै चिन्तित छन् । विदेशिनेको संख्या दिनहुँ बढेकोमा यसलाई रोक्नुपर्ने र विदेशमा जाँदा पैसाको रुख छ भनेर जाने मानसिकता तोड्नुपर्ने उनको धारणा छ । अहिले विदेशमा ५० लाख युवायुवती भएकोले उनीहरुलाई विस्तारै नेपालमै राख्न नसकेसम्म देश विकास सम्भव नभएको डा संग्रौला बताउँछन् ।
विदेशमा जति काम गर्दा स्वदेशमै धेरै गर्न सकिने र विदेश जानुपर्ने भए पनि सीप सिकेर जानुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन ।‘विदेश जाँदा भाषा, रहनसहन, त्यहाँको संस्कृती बुझेर जानुपर्छ । अरुको लहैलहैमा विदेश जाँदा समस्या बढेकोले शुरुमै मुहान सुधार्दै यहीबाट सबै बुझेर जानुपर्छ’ संग्रौला बताउँछन् । आफुले वैदेशिक रोजगार र विदेशमा रहेको नेपाली कामदारको बारेमा पनि धेरै अध्ययन गरेको बताउने संग्रौला वैदेशिक रोजगारलाई तत्काल राज्यले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
विदेशमा कामदारले सिकेको सीप स्वदेशमा लगाउन त्यहाँ रहेका राजदूतावासहरुको पनि ठूलो भूमिका हुने भएकाले राजदूतावासले पनि नेपाली कामदारहरुको रेकर्ड राख्दै उक्त जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने डा. संग्रौला बताउँछन् । विदेशमा रहेका नेपालीहरुको आशाको धरोहर भनेकै नेपाली राजदूताबास नै हुने भएकाले राजदूतावासले नेपालीहरुको सानो भन्दा सानो समस्यालाई पनि ध्यान दिएर सम्बोधन गर्नु पर्छ ।
‘वैदेशिक रोजगारी हाम्रो बाध्यता भए पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प छैन प्राडा संग्रौला भन्छन् । देश विकाश गर्ने नै युवायुवती हुन् । उनीहरु विदेशमा भएपछि देश विकाश कसरी हुन्छ,’ प्राडा. संग्रौला देश विकासको सुत्र प्रस्तुत गर्छन् । देशको विकास, समृद्धि र भविष्यका लागि पनि अहिले नेपालको प्रमुख दुई दल नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रबीच भएको एकताले ठुलो अर्थ राख्ने संग्रौला बताउँछन् ।
‘अब राजनितीमा रुमल्लिएर बस्ने समय हामीसँग छैन, यस्तोमा दुई पार्टीको एकताले देशमा राजनीतिक स्थायित्व र स्थिर सरकारका साथमा राष्ट्र विकासको स्पष्ट मार्गचित्र निर्माण गर्न सक्छ’ डा संग्रौला आफ्नो धारणा राख्छन् । देशमा धेरै राजनीतिक क्रान्ति भयो, अब राजनीतिक क्रान्ति समाप्त भयो । सबै नेपालीहरु अब आर्थिक क्रान्तिको बाटोमा अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् प्राडा.संग्रौला ।